Thomas Partey oo fariin qiiro leh u diray taageerayaasha kooxda Arsenal – Gool FM
Thomas Partey oo fariin qiiro leh u diray taageerayaasha kooxda Arsenal
Dajiye October 9, 2020
(London) 09 Okt 2020. Xiddiga dhawaangalka ah kooxda Arsenal ee Thomas Partey ayaa fariin qiiro leh u diray taageerayaasha Gunners, maalmo kaddib markii uu dhameystiray heshiiska uu ugu wareegay garoonka Emirates.
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si rasmi ah u dhammaystirtay saxiixa laacibka khadka dhexe ee Thomas Partey, kaasoo ay kala soo wareegeen kooxda Atletico Madrid, kaddib markii ay bixiyeen lacagtii lagu jabin karay qandaraaska xiddigan.
Gunners ayaa miiska u saartay kooxda Atletico Madrid qiimo lacageed dhan 50 milyan oo euro oo ah lacagta lagu burburinayey qandaraaska uu Thomas Partey uu ku joogay naadiga reer Spain.
Thomas Partey ayaa fariinta uu u diray jamaahiirta kooxda Arsenal wuxuu ku sheegay:
“Haye Dhalinyaro, aad baad ugu mahadsan tihiin jacaylka iyo fariimaha aan helay”.
“Ma sugi karo inaan qeyb ka noqdo, ma sugi karo inaan ku biiro kooxda”.
“Waxaan dareemayaa wax wanaagsan inaan ka mid noqdo qoys sidan oo kale ah”.
“ Aad baad ugu mahadsan tihiin qof walba jacaylkan, waxaan dareemayaa xushmad”.
Lampard oo war naxdin leh ka helay kulamada caalamiga ah, kaddib markii uu dhaacmay xiddig muhiim ka ah kooxda Chelsea
Muxuu ka yiri Lionel Messi guushii adkeyd ee xulkiisa Argentina uu ka gaaray Ecuador??